Fomba fiasa vaovaon’ny Google ao Shina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Febroary 2019 4:00 GMT
Namoaka fanambarana ofisialy ny Google lnc omaly fa tratran'ny fanafihana antserasera avy any Shina ny orinasa. Niezaka niditra tamin'ny kaonty Gmail an'ireo mpikatroka ny zon'olombelona Shinoa ireo mpanafika. Nilaza ny orinasa fa hiresaka amin'ny governemanta Shinoa momba ny fomba hiasan'izy ireo tsy misy sivana any Shina izy ireo, raha tsy izany mieritreritra ny hanakatona ny google.cn sy ny biraony any Shina ny orinasa.
Nitatitra ireo mpiserasera marobe avy any Shina androany fa mety hahitana ny sarin'ny vono olona tany Tiananmen ny fikarohana sary ao amin'ny google.cn amin'ny “Tiananmen”. Toa nakaton'ny Google lnc ny sivany. Nilaza ireo mpisera Twitter avy any Beijing fa handefa voninkazo any amin'ny biraon'ny Google izy ireo noho ny asa hentitra sy lehibe nataon'izy ireo. Saingy niahiahy kosa ny sasany fa mety hikatona tampoka ny Google.
Nitatitra tao amin'ny bilaogin'ny biraon'ny Google i David Drummond, filoha lefitra mpanatanteraka ny fampandrosoana ny asa sady lehiben'ny raharaha ara-pitsarana fa nahatsikaritra fanafihana goavana nihatra tamin'ny fotodrafitrasany ny orinasa ary nahatonga ny fangalarana ny fananana ara-tsaina avy amin'ny Google tamin'ny tapaky ny volana Desambra. Ary nahita koa izy fa orinasa lehibe 20 hafa no niharan'ny fanafihana tahaka izany ary efa natolotra ny manampahefana amerikana voakasika ny raharaha.
Ankoatra izay, ny tanjon'ireo mpanafika voalohany dia ny miditra amin'ny kaonty Gmail an'ireo mpikatroky zon'olombelona shinoa. Saingy hatramin'izao dia kaonty Gmail roa ihany no hita fa nidiran'izy ireo, ary voafetra tamin'ny fidirana tao amin'ny mombamomba ny kaonty ihany izany (toy ny daty nananganana ny kaonty) sy ny laharam-pahamehana, fa tsy ny votoatin'ny mailaka .
Nahita ihany koa ny fanadihadian'ny Google fa toa nidiran'ny olona hafa hatrany ireo kaonty Gmail ampolony tao Etazonia, Shina- sy Eoropa izay mpiaro ny zon'olombelona ao Shina. Tsy nidirana tamin'ny alalan'ny fanitsakitsahana ny fiarovana ao amin'ny Google ireo kaonty ireo, saingy azo antoka fa tamin'ny alàlan'ny fanjonoana na rindrambaiko mpisompatra napetraka tamin'ny ordinateran'ny mpiserasera.
Nanipika i David Drummond fa raha tsy mahita fomba hiasana tsy misy sivana ny orinasa ary miantoka ny fiarovana ny mpiserasera, dia handinika indray ny fomba fiasany amin'i Shina izy:
Nahatonga anay handinika indray ny fomba hanatanterahanay ny fandraharahana ao Shina ireo fanafihana sy fanarahamaso navoakan'izy ireo – miaraka amin'ny fikasana nandritra ny taon-dasa hametra bebe kokoa ny fahalalahana miteny ao amin'ny tranonkala. Nanapa-kevitra izahay fa tsy hanohy intsony hanivana ny vokam-piarahana ao amin'ny Google.cn, ka mandritra ny herinandro vitsy ho avy dia hiresaka amin'ny governemanta Shinoa mikasika ny fototra ahafahana mampiasa milina fikarohana tsy voasivana ao anaty lalàna izahay. Fantatray fa mety midika izany hoe fanakatonana ny Google.cn, ary mety hanakatonana ny biraonay any Shina mihitsy aza.